Malunga neSino Yentsimbi-I-Huaxiao Metal Corporation Limited
Inkampani iSino Stainless Steel Corporation yatyalwa ngu-Huaxia International Corporation. I-Sino Yenziwe ngentsimbi engenanto ngumvelisi othumela izinto kunye nomthumeli kwelinye ilizwe ochaphazelekayo kuphuhliso kunye nemveliso yentsimbi, ialuminium, icarbon yentsimbi, i-GI, iPPGI, kunye nombhobho, ibha, isivalo, kunye nezinye izinto zentsimbi. Iofisi yethu eyintloko ibekwe eShanghai ngokufikelela okulula kokuhamba. Iofisi yesebe le-Hebei isekwa kwisixeko saseTangshan. Zonke iimveliso zethu zithobela imigangatho esemgangathweni yamazwe aphesheya kwaye zixatyiswa kakhulu kwiimarike ezahlukeneyo kwihlabathi liphela.
Ukumboza indawo ye-4,000 yeemitha zesikwere, ngoku sineqela labasebenzi abangaphezu kwe-15 elijongene ngokukodwa neshishini lokuthumela ngaphandle, inani lokuthengisa lonyaka elidlula i-USD 80Milllon ngo-2018, ngaphezulu kwe-40,000 yeetriki zetoni zeemveliso zetsimbi ezithunyelwa ngaphandle, kwaye sithumela ngaphandle i-100% imveliso yethu ehlabathini lonke.
Amaziko ethu axhotyiswe kakuhle kunye nolawulo olukumgangatho ophezulu kuwo onke amabakala emveliso asenza sikwazi ukuqinisekisa ukoneliseka kwabathengi. Ngapha koko, thina kunye neefektri zamaqabane ethu sifumene isitifiketi se-ISO9001, TS16949.
Ngenxa yeemveliso zethu ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo ebalaseleyo yabathengi, sizuze inethiwekhi yentengiso yehlabathi efikelela kwintengiso yethu ephambili eMntla Melika, kumbindi nakuMzantsi Merika, eYurophu, Middle East, Asia.
Enkosi ngokubukela kwakho